I-RudderStack: Yakha iqonga lakho ledatha yabaThengi (CDP) | Martech Zone
I-RudderStack: Yakha iqonga lakho ledatha yabaThengi (CDP)
NgoLwesihlanu, Oktobha 16, 2020 Lwesine, Okthobha 15, 2020 Douglas Karr
IRudderStack inceda amaqela obunjineli bedatha ukuba abambe ixabiso elingaphezulu kwidatha yabathengi, ngeQonga leDatha yaBathengi (CDP) eyilelwe ngokukodwa abaphuhlisi. I-RudderStack iqokelela idatha yenkampani kuwo onke ama-touchpoint wabathengi-kubandakanya iwebhu, iselfowuni, kunye neenkqubo zangasemva- kwaye iyithumele ngexesha langempela kwiindawo ezingaphezulu kwama-50 ezisekwe lilifu nakweyiphi na indawo yokugcina idatha. Ngokudibanisa kunye nokuhlalutya idatha yabo yabathengi ngendlela yabucala- kunye nokuqonda ukhuseleko, iinkampani ziyakwazi ukuyiguqula ibe zizenzo zeshishini kuyo yonke imisebenzi yazo.
Ii-CDP zesiko zizamile ukusombulula ingqokelela yedatha kunye nokwenza kusebenze, kodwa ngelishwa, uninzi lwazo lwenza ingxaki ibe mandundu ngokwenza izongezo zedatha eyongezelelweyo kunye nezikhewu zokudityaniswa. Iinjineli zedatha zihlala zizifumana zixakekile embindini, kuphela amandla amandla ezixhobo ezinje Snowflake kwaye I-DBT kuba ezinye izinto kwisitaki azidibani nokuhamba kwazo kwedatha okukhulu.
I-RudderStack ibeka abaphuhlisi, izixhobo zabo abazikhethileyo, kunye nolwakhiwo lwanamhlanje ngaphambili nakwiziko, ukunceda iinjineli zedatha kunye neenkampani zabo bafumane amathuba amatsha anamandla ngendlela yokuqhagamshela ezi nkqubo zibalulekileyo kwaye bazenze zisebenze kumbutho wonke.
RudderStack Cloud: Indlela eNtsha yokuThengwa kweDatha yaBathengi bakho
Enye yeenkampani zokuqala ukufudukela kwiRudderStack Cloud Okona kubalulekileyoImiyalezo evulekileyo yomthombo kunye neqonga lokusebenzisana elakhelwe iimeko zentembeko ephezulu. Inkampani ilawula inani elikhulu ledatha eveliswe ngabathengi bayo kwaye iye yakha izixhobo zayo zeCDP kwizixhobo zangoku, kubandakanya i-Snowflake, i-DBT, kunye neRudderStack Cloud.
Nge-RudderStack Cloud, sisuse izithintelo kumthamo womnyhadala kwaye singathumela yonke idatha esifuna ukuyifaka kwi-Snowflake. Singakwazi ukuhlalutya size senze ngokuvisisana nayo yonke idatha ebalulekileyo yabathengi, kwaye ekugqibeleni sibe lishishini eliqhutywa yidatha ngakumbi. ”
UAlex Dovenmuehle, iNtloko yezoBunjineli beDatha, eMattermost
I-RudderStack Cloud yenza kube lula ukuba iinjineli zedatha ziqokelele, ziqinisekise, ziguqule, kwaye zihambise idatha yabathengi kwindawo yokugcina, iinkonzo zokusasaza zexesha lokwenyani, kunye nokusetyenziswa kwamafu asetyenziswa ngamaqela kuyo yonke inkampani. Amagqabantshintshi abandakanya:
Ilifu lale mihla - Yakhelwe phezu Kubernetes yelizwe elizalwa lilifu, lijolise kwisikali esigqithisileyo kunye nokunyamezelana kweziphoso, ngesiseko somthombo ovulekileyo, uyilo lokuqala lwabucala, kunye nezixhobo ezijolise kuphuhliso zokwenza kube lula ukudibanisa imveliso kwisitokhwe sakho esele sikhona, ngelixa kugcinwa kulula ukuyisebenzisa iza nefu SaaS.
Iziko lokuGcina idatha -I-RudderStack Cloud ikuvumela ukuba uguqule indawo yakho yokugcina izinto ibe yi-CDP enezinto ezinokulungiswa, ukuvumelanisa ngokusondeleyo kwexesha, kunye ne-SQL njengoMthombo, ojika indawo yakho yokugcina ibe nguMthombo weRudderStack.
Umphuhlisi Kuqala -I-RudderStack ikholelwa ekubeni ingqokelela yedatha yomthengi kufuneka ibe yeqela lobunjineli, yiyo loo nto imveliso yethu ihlala ingumphuhlisi-wokuqala kwaye idityaniswa nezixhobo esele bazisebenzisa nabazithandayo.
I-RudderStack Cloud yeyona mveliso ifanelekileyo, efikelelekayo kunye nenobunkunkqele kwimveliso yedatha yabathengi.
Bhalisela uvavanyo lweentsuku ezili-14 zasimahla
tags: CDPIplatifomu yeDatha yoMthengiukuqhubaRudderstack ilifu
Douglas Karr Friday, October 16, 2020 Thursday, October 15, 2020
Incwadi yakho yokudlala yeBrand yokuhambisa iXesha leholide eliphumelelayo le-2020
I-Swaarm: Zenzekelayo, ulungiselele, kwaye ulinganise ukuSebenza kwakho kweNtengiso